Tsy miasa amin'ny Mac ny zoma? Ity ny The Real Fix! - Mac
bateria famantaranandro paoma mandany haingana 2019
tsy mandeha tsara ny iphone-ko
iphone 5 tsy maka sary
fa maninona no mihena hatrany ny famirapiratako
Tsy miasa amin'ny Mac ny zoma? Ity ny The Real Fix!
Miezaka ny hiditra amin'ny fivoriana Zoom amin'ny Mac anao ianao, saingy misy zavatra tsy mandeha. Na inona na inona ataonao dia manana olana amin'ny fifampiresahana amin'ny namanao na mpiara-miasa aminao ianao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao hoe maninona ny Zoom no tsy miasa amin'ny Mac-nao ary asehoy anao ny fomba fanamboarana ny olana !
Fampahalalana momba ny zava-misy
Zava-dehibe ny fahalalana fa tsy afaka mandray anjara amin'ny fivoriana Zoom ianao amin'ny fampiasana tranokala toy ny Safari, Chrome, na Firefox. Fa kosa, tsy maintsy maka ny client Zoom ianao.
Mandehana mankany amin'ny Zoom Download Center ary kitiho ny manga DOWNLOAD bokotra eo ambaniny Mizarà ny mpanjifa amin'ny fivoriana .
Manaraka, sokafy izay nahita ary tsindrio Fampidinana . Tsindrio indroa ny Zoom.pkg handefasana ny installer. Araho ny bitsika eo amin'ny efijery hametrahana ny Client Zoom.
Hahita ny mpanjifa Zoom ao amin'ny Launchpad ianao. Antsoina izany zoom.us .
tsindrio Midira fivoriana ary miditra ny ID fihaonana na Anaran'ny rohy manokana hiditra amin'ny fivoriana Zoom.
Mametraha fahazoan-dàlana zoom
Mila fahazoan-dàlana ny Zoom hiditra amin'ny lahasa sasany amin'ny solosainao mba hahazoanao tombony betsaka amin'ny sehatra. Tsindrio ny kisary Apple ao amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery, avy eo kitiho System Preferensi .
Manaraka, tsindrio Fiarovana sy tsiambaratelo . Mitadiava sary masina miendrika trano.
Omeo fidirana amin'ireto manaraka ireto ny zoom.us:
Fakan-tsary : Io dia ahafahanao mampiasa ny webcam-nao mandritra ny antso.
mikrô : Io dia ahafahan'ny hafa mandre anao rehefa miteny mandritra ny antso ianao.
Azo idirana : Io dia ahafahanao mampiasa lavitra mandritra ny antso.
Ahoana ny fomba hanodinana ny efijery amin'ny ipad
Raha toa ka mihazakazaka macOS Catalina 10.15 ny Mac anao dia mamporisika anao izahay hanome alalana zoom.us hiditra amin'ireo fiasa ireo ihany koa:
Files sy folder : Io dia ahafahanao mizara rakitra ao anaty chat, manangona rakitra ao anaty chat, ary mirakitra antso amin'ny solosainao.
Fandraisana an-tsary : Io dia ahafahanao mizara ny efijeryo mandritra ny antso.
Ho fantatrao fa manana zotra amin'ireo rindranasa ireo i Zoom rehefa misy banga maso manga eo akaikin'ny zoom.us ao amin'ny menio.
Manakatona fampiharana hafa izay mety hampiasa ny fakan-tsary na mikrô
Mety tsy mandeha amin'ny Mac-nao ny Zoom satria ny Camera na Microphone (na izy roa) ampiasaina amin'ny fampiharana hafa. Alohan'ny hidiranao amin'ny fivoriana Zoom, manakatona fampiharana hafa mety hampiasa ny Fakan-tsary na Mikrophone. Anisan'izany ny fampiharana toa ny FaceTime, Skype, ary Photo Booth.
Akatony ny zoma ary andramo indray
Mitovy ny fizotrany na mampiasa ny app Zoom ianao, na manandrana manatevin-daharana fivoriana amin'ny tranokalanao.
Tsindrio ny rantsantanana roa amin'ny rindranasa tianao hikatona. tsindrio Miala hanidy ny fampiharana amin'ny Mac anao.
Andramo sokafana indray ny fampiharana raha toa ka miasa izao i Zoom. Raha tsy izany dia mirosoa amin'ny dingana manaraka!
Zahao ny fifandraisanao amin'ny Internet
Ny fifandraisana Internet dia takiana mba hampiasa ilay sehatra. Voalohany, alao antoka fa mifandray amin'ny Wi-Fi ianao amin'ny fipihana ny kisary Wi-Fi eo an-tampon'ny efijery. Raha mahita marika eo akaikin'ny anaran'ny router ianao dia mifamatotra amin'ny Wi-Fi ny Mac anao.
Azonao atao ny manapaka haingana ny olan'ny Wi-Fi amin'ny fiezahana hametraka pejy iray hafa amin'ny tranokalaninao. Raha misy tranokala hafa manaparitaka dia tsy misy ny olana Wi-Fi. Raha tsy misy tranokala mavesatra dia mety misy olana amin'ny fifandraisana Wi-Fi anao.
Raha misy olan'ny Wi-Fi amin'ny Mac-nao
Misy zavatra haingana azonao atao hamahana ny olan'ny Wi-Fi amin'ny Mac anao. Voalohany, andramo esory ny Wi-Fi ary avereno. Ity dia afaka manamboatra olana madinidinika amin'ny fifandraisana.
Tsindrio ny kisary Wi-Fi eo an-tampon'ny efijery, avy eo kitiho Atsaharo ny Wi-Fi .
Tsindrio indray ny kisary Wi-Fi, avy eo kitiho Alefaso ny Wi-Fi . Hamarino tsara fa mifandray indray amin'ny tambajotra Wi-Fi ny Mac anao rehefa miverina Wi-Fi miverina ianao.
Mandritra ny famonoana ny Wi-Fi sy ny fiverenany dia manandrama hamerina ny router anao koa. Ny fanaovana an'io dia mora toy ny mamongotra azy ary mametaka azy hiverina.
Raha mbola tsy hifandray amin'ny Wi-Fi ny Mac anao dia andramo ny mampifandray tambajotra Wi-Fi hafa. Raha afaka mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi hafa ny Mac-nao dia ny router-nao no mahatonga ny olana fa tsy ny Mac-nao.
Ny fanadinoana ny tamba-jotra Wi-Fi anao dia vahaolana mety hitranga hafa rehefa tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra ny Mac anao ary ny tamba-jotra ihany. Rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny Mac-nao dia mamonjy vaovao momba izany izy Ahoana hifandray amin'ilay tamba-jotra. Raha miova izany fampahalalana izany dia mety tsy ho afaka mifandray amin'i Wi-Fi ny Mac anao.
Misokatra System Preferensi ary tsindrio Tambajotra . Avy eo, kitiho Advanced .
Tsindrio ny tambajotra tianao tadiavin'ny Mac anao ny manasongadina. Tsindrio ny bokotra minus (-) hanadino izany tambajotra izany amin'ny Mac. tsindrio ok hanavao ny toe-javatra Mac's Network anao.
Zahao ny lahatsoratray hafa momba dingana fanitarana ny router efa mandroso kokoa !
Manakatona programa hafa amin'ny Mac ampiasainao amin'ny alàlan'ny herin'ny CPU marobe
Mety hianjera ny zoom raha toa ka havaozina hatramin'ny 100% ny CPU-n'ny Mac-nao. Alohan'ny hidiranao amin'ny fivoriana Zoom, dia tsara ny manakatona ireo programa hafa amin'ny solosainao izay mampiasa herin'ny CPU be dia be. Anisan'izany ireo zavatra toy ny rindrambaiko fanovana horonantsary sy Google Sheets miaraka amina fampahalalana marobe.
Ny Action Monitor dia mamela anao hijery izay programa mampiasa CPU be dia be amin'ny Mac. Ny fomba haingana indrindra hanokafana ny Fanaraha-maso ny hetsika dia ny Fikarohana Spotlight.
Tsindrio miaraka ny bara habaka sy ny Command. Soraty ny 'Monitoring de activité' ary tsindrio ilay Miverena lakile hanokafana ny Monitor Monitor.
Mitadiava programa misy izay mampiasa CPU tsy mitovy be dia be amin'ny CPU CPU ary akatony ireo. Raha toa ka mitovy ny ahy ny Monitor Monitoranao - tsy misy fampiharana mampiasa mihoatra ny 15% - miroso amin'ny dingana manaraka.
Atsaharo ny Mac-nao
Ny famerenana indray ny Mac anao dia fomba haingana hamahana olana isan-karazany amin'ny rindrambaiko madinidinika. Mihidy voajanahary ny programa rehetra mandeha amin'ny Mac anao, mahazo fanombohana vaovao rehefa miverina ny solosainao.
Tsindrio ny sary famantarana Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery. tsindrio Haverina velomina .
Atsaharo ny fiarovana ny firewall amin'ny Mac
Indraindray ny rindrambaiko firewallall dia mety manakana ny Zoom tsy hiasa amin'ny Mac anao. Mety hadikan'ny rindrambaiko ho toy ny karazana fandrahonana fiarovana ny Zoom ary tsy avelany hihazakazaka.
Azonao atao ny manafoana vonjimaika ny firewall Mac anao amin'ny alàlan'ny fandehananao System Preferences -> Security & Privacy ary manindry ny Firewall kiheba tsindrio Vonoy ny firewall hampandeha ny firewall Mac anao. Mety tsy maintsy mampiditra ny teny miafinao Mac ianao alohan'ny ahafahanao manitsy ny fikirana firewall.
Raha tsy te-hamono vonjimaika ny firewall ianao dia azonao atao ny manampy ny Zoom amin'ny lisitry ny rindranasa azonao avela hifandray hatrany.
Mandehana any amin'ny System Préférences -> Security & Privacy -> Firewall ary tsindrio Safidy firewall . Tsindrio ny bokotra miampy (+) , avy eo tsindrio ny zoom.us. tsindrio hametraka avelao ny fifandraisana miditra avy amin'ny Zoom.
Farany, kitiho ok hanamarina ny fanapaha-kevitrao.
Raha mbola tsy mandeha amin'ny Mac-nao ny Zoom dia mety ho tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny fanohanan'ny mpanjifa. Mandehana mankany amin'ny Zoom Help Center hianatra ny fomba hifandraisana amin'ny fanohanan'ny mpanjifa.
Raha tsy mifandray amin'i Mac-nao misy Tambajotra Wi-Fi, mety misy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana. Mifandraisa amin'ny fanohanan'ny Apple amin'ny alàlan'ny telefaona, mampiasa chat mivantana, na amin'ny Apple Store eo an-toerana. Hamarino tsara fa handahatra fotoana iray ianao raha mikasa ny hiditra ao amin'ny Apple Store.
Zahao ny lahatsoratray hafa raha tianao ny mampiasa Zomy amin'ny iPhone na iPad-nao !
Namboarinao ny olana ary niditra soa aman-tsara tamin'ny fivoriana Zoom ianao! Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny namanao sy mpiara-miasa aminao rehefa tsy miasa amin'ny Mac-ny i Zoom. Avelao ny fanontaniana hafa anananao momba ny Zoom na ny Mac ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.